EndeavorOS inotangisa yayo Kubvumbi 2021 ISO yatove neLinux 5.11 | Linux Vakapindwa muropa
Kubudirira kwekuparadzirwa kwaimbozivikanwa seAntergos, kunyangwe pane imwe nguva isu tichafanirwa kumira kutaura izvi, zvakambomira kwechinguva. Zvirinani maererano nemifananidzo mitsva yeIO, uye yekutanga kubva muna 2021 yakavhurwa yatove munaKurume. Maawa mashoma apfuura takazivisa iyo Kubvumbi 2021 kuburitswa, a EdzaOS 2021.04.17 Yasvika izere nenhau, chimwe chinhu chine musoro kana tikatarisa kuti kugovera kunobva paArch Linux.
Pakati pezvinhu zvitsva zvakauya tine Linux 5.11. Zvaishamisa kuti havana kuzviisa mwedzi wapfuura sezvo iyo kernel vhezheni yakasvika pakati paFebruary uye EndeavorOS iri Rolling Kuburitswa. Asi nhau dzese dzisina kusvika mazuva makumi matatu apfuura dzasvika panguva ino, uye zvakare zvakakosha kuti uzive kuti maSway neBSPWM windows mamaneja anogona kushandiswa. Heano ma nhau dzakatanhamara ayo asvika ne EndeavorOS 2021.04.17.
Pfungwa dzeKuyedzaOS 2021.04.17
Kubvira kwekuisa iyo Sway uye BSPWM windows mamaneja, uye ivo vanogona kushandiswa vega kana pamusoro peiyo graphical nharaunda.
Yakagadziridzwa rutsigiro rweNVIDIA GPUs.
Yakagadziriswa otomatiki yekupinda chimiro uye inofanirwa kushanda zvakanaka mushure mekumisikidzwa
Tsigiro ye USB ikozvino inogona kugoneswa kana uchishandisa iyo system muVirtualBox.
Iyo Welcome app yakagadziridzwa kuita kuti zvinhu zvive nyore kune vashandisi veArch Linux.
Pacdiff chishandiso, imwe ine mushandisi interface kugadzirisa system shanduko uye package package mafaira.
Nyowani software nhau bhatani inoratidza dzidziso uye mhinduro kumatambudziko akajairika.
EndeavorOS kugovera kunoshandisa iyo Rolling Release modhi yekuvandudza, saka vashandisi varipo vanenge vatogamuchira zvese zvidzoreso zvinosanganisirwa munaApril 2021 ISO. mufananidzo uripo en Iyi link.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » EndeavorOS inotangisa yayo Kubvumbi 2021 ISO yatove neLinux 5.11 nedzimwe nhau